လူ ၁၃ ဦး သေ တဲ့ က ထိန် ကားေ မှာက် မှု ပါ ဝင် ခဲ့ တဲ့ ဒေါ်လွင်လွင်မြင့် ရဲ့ စိတ်မေ ကာင်း စ ရာ နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ – Shwe Wiki News
Homepage / Local News / လူ ၁၃ ဦး သေ တဲ့ က ထိန် ကားေ မှာက် မှု ပါ ဝင် ခဲ့ တဲ့ ဒေါ်လွင်လွင်မြင့် ရဲ့ စိတ်မေ ကာင်း စ ရာ နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ
လူ ၁၃ ဦး သေ တဲ့ က ထိန် ကားေ မှာက် မှု ပါ ဝင် ခဲ့ တဲ့ ဒေါ်လွင်လွင်မြင့် ရဲ့ စိတ်မေ ကာင်း စ ရာ နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ
နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ကထိန်ခင်းဖို့ သွားတဲ့ ကား သပိတ်ကျင်းနားမှာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်…. ဒီကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်စဉ်လေးဟာ အင်တာနက်ပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ဖတ်ရှုရသူအားလုံးက ကရုဏာသက်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်….
ကားမှောက်လို့ သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာ ဆရာတော် ၂ ပါးလည်း ပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီး ၁၀ ဦးလည်း သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…. အဆိုပါ သေဆုံးသူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မော်လမြိုင် ဖက်တန်းနယ်မြေ ဒေါင်းမင်းလမ်း (က) လမ်းမှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေါ်လွင်လွင်မြင့် (၅၃) နှစ် မလမ ထ- ၃ ကျောင်းသူဟောင်း၏ နောက်ဆုံးခရီး ပုံရိပ်လေးတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ် …
ဒီပုံလေးတွေကို ကြည့်ရသူတွေဟာ ဒေါ်လွင်လွင်မြင့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးနေတာလည်း တွေ့ပါတယ်..
ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ အဲဒီပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….ကွယ်လွန်သွားသူအပေါင်းလည်း ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ကြပါေ စ…
Previous post နာ မည် ကြီးေ န တဲ့ လုံး ဝ အလ န်း စား သားစစ် ရဲ့ ရင် ထဲ သို့ Music Video
Next post အသက် မပြည့် တဲ့ ကောင်မလေး ကို စားပြီး နား မ လည် လုပ် သွား တဲ့ ကောင် ပါ (ရုပ်သံဖိုင်)